Khulisa abavelisi beentente | China Khulisa intente Factory & Suppliers
Khulisa intente 100*100*200 CM Hydroponics Ukutyalwa kweGadi yangaphakathi
IVirex 100 * 100 * 200 khulisa intente, lucango lwe-T loyilo, kwaye imathiriyeli yi-600 D ilaphu le-oxford kunye ne-95% ebonakalisa i-mylar.
60x60x120 CM Khulisa intente Customized Growth Box Room Garden
IVirex 60*60*120 cm khulisa intente eneendawo zomoya kunye nefestile yemesh .Isikhala somoya sinokusebenzisa isihluzo sekhabhoni, isihluzo se-inline duct fan, njalo njalo; kunye neefestile zemesh ezilungileyo zomoya omtsha zingena efestileni.
300*300*200 CM ehlala ixesha elide lokuKhulisa ibhokisi yeTente yokuTyala iOxford Mylar
I-VIREX 300 * 300 * 200 cm yokukhulisa intente efanelekileyo yokutyala ngaphakathi nangaphandle umthamo omkhulu unokukhulisa izityalo ezininzi kwaye kulula ukuzifaka.
IVirex hydroponics greenhouse ikhulisa intente ephezulu ebonakalisa ilaphu le-oxford elingangeni manzi langaphakathi kwigumbi elimnyama
150 * 150 * 200 CM Khulisa intente yokuGcina iNqanaba lokuLima ukuKhula kweHydro
Ubungakanani bentente yokukhulisa iVirex yi-150 * 150 * 200 cm kwaye imathiriyeli yi-600 D ilaphu le-oxford, ngaphezulu kwe-95% ebonakalisa i-mylar, ityhubhu yokupeyinta emhlophe kunye ne-ABS connnertors.
I-Virex 90 * 60 * 90 cm ikhule intente isayizi encinci ayihlali kwindawo, kulula ukuyihambisa.Umgangatho omhle kunye nokuqina, kulula ukuyifaka.
80*80*160 CM Khulisa intente Hydroponics Indoor Garden 600D Oxford
I-Virex Horticulture 80 * 80 * 160CM i-Mylar Hydroponic Grow Tent kunye ne-Obeservation Window kunye neTreyi yoMgangatho yokuKhula kweSityalo sangaphakathi.
40 * 40 * 120 CM Khulisa intente ye-Hydroponic Culture Plant Indoor Greenhouse
I-Greenhouse ikhulise ukutyalwa kweentente kunokukhuthaza ngokufanelekileyo ukukhula kwezityalo, ukuphucula izinga lokukhula kwezityalo.Ubungakanani bayo obuncinci abuthathi indawo, kulula ukuyifaka kunye nokuhamba. Ilungele ukukhula ekhaya okanye ngaphakathi.
Khulisa iTent Indoor Garden Plant High Quality 120 * 120 * 200 CM
I-Virex yokukhulisa izinto zentente yi-600 D i-oxford cloth kunye ne-high reflective mylar .Ifanelekile ukutyala kwangaphakathi, ubungakanani obuncinci abuhlali kwindawo elula ukuyifaka kunye nokuhamba.
2 In1 Khulisa intente 600 D High Reflective Mylar Factory Supply Home Grow Box
Intente ye-2-in-1 ifanelekile kumashishini kunye namakhaya, kunye neendawo ezintathu zokutyala izityalo ezahlukeneyo kunye neentyatyambo, okuvumela ukujonga okungcono kunye nokulawula ukukhula kwezityalo.
Uphahla lweCube Khulisa intente eshushu idumile ekungangeni manzi kwiingcango eziKhulisa iikhithi ezigcweleyo zentente
I-VIREX yophahla ityhubhu yokukhulisa intente luyilo olwahlukileyo, lukhangeleka ngathi yindlu.Yenzelwe ii-attics, uphahla, kunye namagumbi angaphantsi, ikuvumela ukuba ukhulise izityalo kwi-attics, amagumbi, amagumbi angaphantsi, kunye namagumbi anesilingi eziphantsi.